बारम्बार गर्भपतन भइरहन्छ? यस्ताे छ कारण र उपचार – Health Post Nepal
बारम्बार गर्भपतन भइरहन्छ? यस्ताे छ कारण र उपचार
२०७८ साउन ६ गते ११:२६
संसारमा धेरै व्यक्तिहरू सन्तान चाँहदा चाँहदै पनि गर्भपतन भएर हैरान भएका छन्।
यदि कुनै महिलाको ३ वटा भन्दाबढी लगातार गर्भपतन हुन्छ भने त्यसलाई बराबर गर्भपतन भन्दछन्।
यदि कसैले आफ्नो खुसीराजीले गर्भपतन गराउँछन् भने त्यसलाई स्वयम् गर्भपतन भएको मानिदैन। १ प्रतिशत महिलाको सन्तानोत्पादनको उमेरका यस्तो गर्भपतन हुने गर्दछ। एक पटक गर्भ पतन भइसके पछि फेरी गर्भपतन हुने चान्स ३० प्रतिशतले बढ्छ।
कतिपयलाई गर्भपतन हुने कारण पनि छैन।
प्रथम त्रैमासिकभिक हुने गर्भपतनका कारणहरू
वंशजः आमाको उमेरसँग पनि सम्बन्धित छ। सबैभन्दा बच्चाको उत्पादन गर्ने उपयुक्त उमेर २० बर्षदेखि ३० सम्म हो। बाबुको त जति भए पनि फरक पर्दैन। आमा ३५ बर्ष काटेपछि विस्तारै विस्तारै खतरा बढ्दै जान्छ। क्रोमोजम्सको असामान्य कारणले पनि गर्भपतन हुन्छ।
संक्रमण : सन्तानोत्पादन प्रणालीका अगंहरूमा संक्रमण भएमा पनि गर्भपतन हुन सक्छ बराबर हुनेमा कुनै सम्बन्ध छैन।
अटोइम्युनिटी पनि हुन सक्छ।
चिकित्सा विज्ञानमा कारण पत्ता लागेन भने इडियोथिक भनिन्छ। हाम्रो धर्मशास्त्रमा उपाय नलागे पछि भाग्यलाई दोष दिइन्छ। त्यसैले कारणै पत्ता नलाग्ने पनि धेरै रोगहरू छन्।
द्धितीय त्रैमासिकभित्र गर्भपतन
भ्रूणको गर्भाशयमा बस्दा हुने समस्याले बढी द्धितीय त्रैमासिक गर्भपतन हुने गर्छ। बराबरमा क्यूरेट गरेर गर्भपतन गराएका महिलाको सर्भिक्स नै असक्षम हुन सक्छ। त्यस्तै योनीबाट अप्रेशन गरेर निकालेका महिलाहरू तथा सर्भिस काटेर फालेको अवस्थामा पनि यस्तो हुन सक्छ।
पाठेघरको फाइब्रोइड, महिलाको दीर्घरोग , संक्रमण, इडीयोपेथिक आदि कारण पनि पटक–पटक गर्भपतन कारण बन्न सक्दछन्।
निदान : मेडिकल, सर्जिकल र अस्ट्रेटिक वृतान्त लिनु अनिवार्य छ। वृतान्त सोध्दा पहिले गर्भपतन भएको छ कि छैन, प्लासिन्टाको तन्तुको जाँच तथा आमाको दीर्घरोग बारे थाहा पाउन जरूरी छ।
परीक्षणमा आमाको रगतमा चिनीको अवस्था, भीडी परीक्षणमा आरएल, थाइरोइड फक्सन, हिस्टेरोस्कपी, ल्याप्रोस्कोपी, क्यारोटाइपीङ्ग (लोग्ने स्वानी दुवैको) इन्डो सर्भाइकल स्वाव पनि जरूरी छ।
उपचार : गर्भवति हुनुभन्दा पहिले मनोवैज्ञानिक परामर्श, ३ पटक गर्भपतन भए पनि ६५ प्रतिशत अझै गर्भघारण तथा सफल बच्चा जन्माउने चानस हुन सक्छ।